आजको विश्वकप उद्घाटन समारोह र म्याच : कति बजेदेखि? कुन च्यानलमा हेर्ने? :: BIZMANDU
प्रकाशित मिति: Jun 14, 2018 4:08 PM
काठमाडौँ। विश्वले सर्वाधिक रुचाउने खेल फुटबलको महाकुम्भ विश्वकप फुटबलको ज्वरो आजदेखि उत्कर्षमा पुग्ने क्रम सुरु हुँदैछ।
विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको सुरुवात आजदेखि हुँदैछ। एक महिना लामो प्रतियोगिताका लागि विश्वभरका फुटबल प्रशंसकहरु तयार भई बसेका छन्।
आजको उद्घाटन खेल रसिया र साउदी अरेबियाबीच हुँदैछ। खेल नेपाली समय अनुसार राति पौने ९ बजे (८:४५) मा सुरु हुनेछ। त्यसभन्दा दुई घण्टाअघि उद्घाटन समारोह हुनेछ। अर्थात् नेपाली समय अनुसार पौने ७ बजे (६:४५) देखि उद्घाटन समारोह हुनेछ।
उद्घाटन समारोहमा करिब ५ सयको संख्यामा नर्तक, जिम्न्यास्ट र ट्राम्पोलिनिस्टहरुले विश्वलाई स्वागत गर्नेछन्। उद्घाटन समारोहमा प्रदर्शन गर्नेहरुमा रुसी कलाकार आइडा गारिफुल्लिना, अंग्रेज कलाकार रब्बी विलियम्स, विल स्मिथ, निक ज्याम आदि रहेका छन्। ब्राजिली स्टार रोनाल्डो पनि उद्घाटन समारोहमा देखिनेछन्। बलिउड स्टारमा वरुण धवन र ऋतिक रोशन देखिँदैछन्। ८० हजारको संख्यामा फुटबल फ्यानहरु स्टेडियममा उपस्थित हुनेछन्।
फिफाद्वारा प्रकाशित आधिकारिक मिडिया राइट्स होल्डरको सूचीमा नेपालसहित दक्षिण एसियाका देशहरुमा आधिकारिक प्रसारण संस्था सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इन्डिया रहेको छ।
सोनीले आफ्नो टेन २ र टेन २ एचडीमा अंग्रेजी भाषामा कमेन्ट्रीसहित विश्वकप खेलहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछ। सोनी टेन ३ र टेन थ्री एचडीमा भने हिन्दी भाषामा कमेन्ट्रीसहित प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ।
नेपालसहित दक्षिण एसियाली देशका लागि विश्वकप उद्घाटन समारोह स्याटेलाइट च्यानलहरु सोनी टेन १, सोनी टेन ३ र सोनी इएसपिएनमा साँझ ६ बजेर १५ मिनेटदेखि हेर्न सकिनेछ।
फिफाका अनुसार नेपालको इन्टरनेट, मोबाइल र रेडियोमा प्रसारण अधिकार समेत सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इन्डियाले किनेको छ। सोनीको आधिकारिक वेबसाइट तथा एप सोनी लिभमार्फत् मोबाइल र इन्टरनेटमा विश्वकप उद्घाटन समारोह र म्याचहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ।
यद्यपि नेपालमा कन्टेन्ट देखाउने कि नदेखाउने भन्ने अधिरका सोनी पिक्चर्स नेटवर्कसँग नै रहनेछ। उसले आफ्नो विज्ञापन र लक्षित दर्शकलाई विचार गरी आफ्नो कन्टेन्ट भारतमा मात्र देखिने बनाउन पनि सक्छ।